Jumpsuit yeVatangi, Chikamu 1 | Kubva kuLinux
Jumpsuit yeVatangi, Chikamu 1
pandev92 | | Kuronga
Mushure mekunge ndatanga kudzidza C #, ndakafunga kutanga kosi ipfupi, kuti ndikwanise kudzidzisa nenzira yekutanga, mashandisiro eC # uye mono muLinux.
Chinangwa ndechekupa ruzivo rwekutanga uye pakupedzisira muzvikamu zvazvino, kukwanisa kupa zano rekuti ungashandisa sei mono, zvese neGTK # uye neQt 4 kuburikidza qyoto.
1 Mubvunzo wekutanga vamwe vanozobvunza ndewekuti: Chii chinonzi Mono?
2 Chii chatingaite naMono?
Mubvunzo wekutanga vamwe vanozobvunza ndewekuti: Chii chinonzi Mono?
Mono ipuratifomu yakagadzirirwa kuti igadzirise vanogadzira, kugadzirwa kwemuchinjiko-chikuva mashandisirwo, anotsigirwa neiyo Xamarin chirongwa.
Iko kuvhurwa kwekushandisa kweMicrosoft.NET, zvichibva pane zviyero ECMA yeC # uye iyo CLR (iwo chaiwo muchina unomhanyisa kodhi, mutori wemarara, uye anobata zviwanikwa).
Mono inobvumira kuumbwa kwemashandisirwo eLinux, Windows, Osx, iOS, Android, Windows Foni nezvimwe…, pamusoro pekugona kushandisa Windows Mafomu muWindows, Gtk uye Qt muLinux, Cocoa muOx senzvimbo.
Mono inobvumira kusangana kweC #, Visual Basic, Java, Python, Ruby, Eiffel, F # nemimwe mitauro, muchirongwa chimwe chete. Iyo C # compiler ine rezinesi pasi peMIT / X11 uye iyo GPL. Zvishandiso zviri pasi peGPL rezinesi, iyo nguva yekumhanya, pasi pe LGPL 2.0, maraibhurari ari pasi peMIT X11, uye ASP.NET, MEF, DLR, AJX, pasi peMicrosoft Permissive License uye APACHE2.
Kuziva zvakawanda nezve patent uye nekujekeswa nekuti hapana chaicho njodzi, ndinoreva kune imwecheteyo webhusaiti yemon. http://www.mono-project.com/License
Chii chatingaite naMono?
Tinogona kugadzira kubva kune akawanda mapuratifomu ekushandisa nekukurumidza, kune dhatabhesi dzakabatana neMysql, Postgresql nezvimwe ..., kumapeji ewebhu.
Isu tine izvozvi monodevelop , imwe yeiyo yakazara IDEs muLinux, iyo inoshanda paLinux, Windows uye Mac OSX.
Iyo zvakare inobvumidza kunyora mitauro yakawanda, kusanganisira C #, Visual basic.net, C / C ++ uye Vala.
Mune ino kesi ini ndiri kuzodzidzisa maitiro ekuisa yazvino vhezheni muUbuntu uye zvigadzirwa, mune mamwe madhiri panzvimbo, seOpensuse kana Archlinux, isu tichawana yazvino vhezheni mune yepamutemo reposheni.
Kutanga, isu tinowedzera iyo repository
Ipapo isu tichagadzirisa uye nekuisa nharaunda nemaraibhurari
Kana zvese zvangoiswa, isu tichafanirwa kutangazve iyo system.
IDE, CHITANGO CHEKUTANGA
Tichavhura Monodevelop, ipapo Menyu »Faira» Nyowani »Solution uye bhokisi re dialog rinovhura, inonzi mhinduro nyowani seizvi:
Isu tichapa ac #, console chirongwa, uye isu tinopinda muzita reprojekti uye isu tichaipa nzvimbo uye pakupedzisira tinoipa kuti igamuchire, uye nekudaro iyo yakasarudzika uye inozivikanwa Hello World ichavhurwa.
Muchirongwa ichi chekutanga, tichawana zvinhu zviviri zvakakosha:
1: Basa hombe, iro rinosungirwa kuita chero chirongwa, nekuti muturikiri achatsvaga chikamu ichocho, kuti atange kuchiita. Mune ino kesi, isu takasiyana kubva kune mimwe mitauro pane iro rakachengetedzwa izwi Main, Inotanga nemavara makuru uye isu hatigone kukanganisa sezvo, zvikasadaro, chirongwa hachishande.
2: Iwo wekuraira Console.WriteLine ();
Uyu murairo unotibvumidza kuratidza mavara pachiratidziri. Console.WriteLine, iri mukati me "System" namespace, saka sezvauri kuona, rairo "kushandisa System" inosanganisirwa pakutanga kwechirongwa.
WriteLine, inotibvumidza kuratidza mavara, tichiisa pakati pemaviri makotesheni, kana akasiyana, tichiaisa pasina makotesheni.
Chekupedzisira, isu tichaita chirongwa ichi, tichirova iyo F5 kiyi.
MuC #, isu tine akasiyana marudzi akasiyana pakati pavo:
Int yenhamba dzese, Float yenhamba dzine madimikira,kaviri manhamba ane madimikira asi aine huviri hwakanyatsoita, SaIsakari yezvinyorwa, tambo yetambo tambo, bool ye "Chokwadi" kana "manyepo" uye decimal . (Kune mamwewo marudzi, asi parizvino hazvidiwe kuti uzive ese, tinogadzirisana iwo makuru).
Misiyano inoziviswa seinotevera:
Mune mamwe mazwi: typeVariable variableName = data;
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve mhando dzandinosiya inotevera link: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms228360%28v=vs.90%29.aspx
DHINDA ZVINODZANANISWA MUTERMINI
Kutanga isu tinoshuma musiyano mukati meI MAIN basa, semuenzaniso:
int costOfPrice = 14; int VAT = 6; int sumTotal = VAT + mutengoPrice; Console.WriteLine (sumTotal);
Ini ndinokusiya iwe kubata.
Mhedzisiro yekuitwa mune yakasarudzika sumTotal, iyo huwandu hweshanduko yemutengoOfCoste uye iyo inoshanduka Iva ichaonekwa pachiratidziri.
Tine nzira mbiri dzekuita makomendi, yekutanga ndiyo yakasarudzika nzira, iya yemashoko emutsara uye inoitwa seinotevera:
Inoiswa pamberi penyaya, mabara maviri: // Iyi mutsara-mutsara
Mitsara-mitsara mitsara inoitwa seinotevera:
Chinyorwa chinotangirwa na: "/ *" uye chichipera na "* /"
Zvakanaka, ndinosiya chikamu chekutanga pano, svondo rinouya, ndichaedza kutaura zvakadzama nezvekushandiswa kwemisiyano, ndichaunza iyo if, nepo nezvitatimendi, uye ini ndichatsanangura pamusoro pezvinhu, makirasi uye mabasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kuronga » Jumpsuit yeVatangi, Chikamu 1
Zvakanaka, ini ndakarongedza mamwe maapplication ari nyore muC # ane mono, chimwe chezvinhu zvakaita kuti ndichinje (chaive chekuti ndinovenga Gtk, nesimba rangu rese), hapana chakafanana nehurongwa hweQT, uye chimwe chinhu ndechekuti python inoita senge mutauro uri nani, uyo zvakare unobvumidza nyore kutama pakati pemapuratifomu.
Kunze kweizvi ini ndinofanira kubvuma kuti MonoDevelop ndeimwe yeakanakisa mazano mune yakasununguka nyika, chete inopfuurwa neQTCreator kuti nzira yangu yekuona zvinhu inotora zvakawanda kumberi, ndinobvuma kuti c ++ kwandiri ndiwo musoro.
Kunyangwe izvozvi tave nePycharm vhezheni yeCommunnity Edition, (iyo kunyangwe isiri openource iri yemahara, kungofanana neyakaipisisa) ye python uye chokwadi chiri chakanakisa "Python + Pychar + QtDesigner" kana "Sublime + Pycharm + QtDesigner" iri nyore kwazvo kushanda neinopfuura muMonoDevelop. Pasina kutaura kuti Django, Web2Py, iri nani kwazvo pane kushanda mumono webhu chikamu.
Zvandiri kureva ndezvekuti zvinoita kunge zano rakanaka kwandiri kana mumwe munhu anoronga muVisual Studio .Net achida kutamira kune dzimwe nzira dzekusununguka naMono, zvakanaka, asi kana akavimbika wesoftware anofarira uyo ari kudzidza kuronga izvozvi, wadii shandisa mapuratifomu zvachose? akasununguka kubva pakutanga seC ++ kana Python… Izvo zvisingambofa zvakabuda musitayera uye zvinonyanya kufarirwa mazuva ese.
Iye zvino chero chirongwa chekudzidzisa chinogamuchirwa, uye chero mugadziri anofunga kubatsira nharaunda kuve iri muMono, kana mune chero mumwe mutauro, anogamuchirwa zvakare.
Ini ndaizoshandura Pycharm yeNinja-IDE
Ini ndinoda + Pycharm Ninja Ideas ichiri kushayikwa, ye ninja ide, ini ndinofarira Sublime.
Chinhu pamusoro pePycharm ndechekuti iyo yemahara vhezheni yakafanana chaizvo neNinija IDE: /
Pycharm Autocompletion yakanyanya kunaka, kodhi Refactor futi, git kusanganisa kwakanaka. Izvo zvinhu zvitatu zvandisina kukwanisa kuwana neNinja-Ide kana nemapulagini.
Kupesana nePyCharm inoshandisa "Java", uye inorema, asi Eclipse inoishandisa zvakare asi iwe unoona mashandisiro ayo.
Iye zvino ndinoona yakawanda yeramangwana yeNinja-Ide asi haina zvinhu zvakawanda zvekushandisa. Ndiyo nzira yangu yekuona zvinhu
Unogona kushandisa mono C # ne qt zvakachengeteka, uchishandisa qyoto, ini ndasiya chinongedzo muchipositi.
Hongu ndinoziva, sekutaura kwandakaita handisi kupikisana naMono, kunyangwe C # inoita kunge mutauro uri nyore kudzidza. Uye ini kunyange ndine imwe kana imwe yakatenderwa kosi, asi sezvandakambotaura, kune matekinoroji emahara zvachose kune mumwe munhu ari kutanga mariri, uye iwo haadi chero chaiyo chikuva.
Ini ndinonyatso kudzivirira python, asi ndiri kuita yekutanga nhanho yeOracle Java Gadzira SE chitupa, nekuda kwekuti ndinofanira kuwedzera chimwe chinhu pakudzidza kwangu, uye nekuti kudiwa kwevanogadzira Java "dzimwe nguva" kwakanaka muVenezuela. Kunyangwe iri gore rapfuura maDJango akawedzera zvakanyanya, uye ndinotarisira rimwe zuva kuzvipira zvizere kuhurongwa.
PS: Admas de Qyoto iri zvakare Qt4Dotnet ye c #
PS: Chengeta izvo zvinongedzo kune microsoft MSDS. Iwe une pano zvinyorwa zve mono: http://docs.go-mono.com/ haha.
Asi ivo vari muChirungu xd
Mono: Microchot's wedge pane emahara mapuratifomu.
Zvakanaka, kana tsika yacho ichiripo, tinogona kutsiva EEE, uye C # pamwe ndeye mahara.
Izvo hazvina kunaka uye ini ndinogona kubvumirana newe pane izvo, asi kana iwe ukaedza, semuenzaniso, kugadzira chirongwa chinoshanda pamapuratifomu ese uye kushandisa mutauro unozivikanwa, haisi yakaipa sarudzo.
Vandaidzidza navo vakapusa Java matomu uye havadi kutarisisa, ipapo vakawana C # uye ikozvino vanoda C # uye vanotaura chipembenene chePython, semuenzaniso.
Mono inzira yekushanda chirongwa chimwe kubva kumapuratifomu akasiyana, ndinozviwana ndiri mu tirade sezvo pfungwa yacho iri huru uye inoshanda, asi ini handidi hangu C #
Hazvina mhosva kuti vakapfeka zvakadii tsoko yesilika, kana iyo Mono mune ino kesi, ichiri nzvimbo yeMicrosoft, yakagadzirirwa muchikamu chekutanga kutakura iyo .NET fomati kuGNU + Linux.
Mono inonyatsodiwa here kukudziridza muchinjiko-chikuva mashandisiro?
Mhinduro yacho yakajeka uye ine simba: HERE.
Izvo hazvidikanwe nekuti mhando yemashandisirwo ayo Mono [b] akatarisana kuti haasi chicha kana lemonade [/ b]: iyo yekuwedzera kumhanya kweC Shit, ndinoreva Sharp, pamusoro pePython, inongoshanda chete kana uchishandisa zvakaoma kunyorera uye kugadzira kushandiswa kwakanyanya zviwanikwa zvemuno senge HW uye hwaro hwekushandisa system. Kune * zvese * zvimwe zvese zviripo Python + Qt kana, kana tikataura nezve mafomu ebhizinesi, imwe inotyisa CamelCase inonzi Java.
Nekudaro, kana isu tichida chikumbiro chakamomarara chemunharaunda kuti chishande zvakaringana pamapuratifomu akasarudzika, sarudzo chete inoshanda kuronga chirongwa chakashandiswa uchifunga nezvehunhu hwenzvimbo iyo ichamhanya nekushandisa C ++.
Wakaverenga here marezinesi eMono? Haisi yekungopokana neMicrosoft tantrum (iyo yandinojekesa, ini ndoziva iyo shitty kambani iri uye ndine zvikonzero zvangu zvekurwisa iyo) asi ndichizviisa pasi pemitemo yayo yekumanikidza.
Unogona kukodha zvese zvinoshandiswa zvaunogona kufunga muPythonQt kuitira kuti vasangova multiplatform asi kunyangwe emunharaunda / gore mahybrids ane maitiro akafanana asi zviri nani kutenderera kupfuura dzimwe nzira dzese.
Zvino kana yega processor processor ichiverenga chete dzimwe nzira ndeye C / C ++.
Chiongorora Nano: dai iyo .NET jongwe naMono ndizvo zvavano shambadzira saka nhasi zvese zvaizove zvichikura nenzira iyoyo, zvese: webhurawuza, vatambi vemimhanzi, maspredishiti, vapepeti vemifananidzo, chero chaunoda, musimboti, iwe uchapuruzira mapendekete nezvose. kamwe uye iwe waizochimisa nechishoma shanduko kune chero chikuva, handiti!? Heh, zvinoshamisa sei kuti hazvisi kuitika futi ..>: D
Usazviregere iwe uchimisikidzwa nenyoka iyo inotengesa mamirioni ane mavara (iyo 'multiplatform' hose kuva mumwe wavo).
Ini ndiri weiyo PHP tsvimbo uye nePython ndine zvandinoda, zvakawanda zvekudzidzira kupfuura zvepashure, asi Python nhasi inobvumidza kukodha zvese munharaunda, kubva kuchombo chekushandisa, kuburikidza neiyo yakasimba desktop application kune yakazara webhusaiti, CRM kana webhu kunyorera iyo iwe fungidzira. Icho chaicho chinooneka, Mono hutsi hwave uchitengesa kwenguva yakareba uye hunoramba hwakaganhurirwa kunharaunda yeniche.
Kana paine chimwe chinhu chinoratidzira iyo F / LOSS ndiko kusagadzikana kwevagadziri avo vausingakwanise kutengesa chero zvisina maturo uchishandisa mazwi chete anonzwika zvakanaka - ndinosiya izvo kune 'vanogadzira' vanoshandisa Microsoft 'matekinoroji' -, dai Mono aive chaizvo kushamisika kwazvinotaura kuve kwaizotogamuchirwa zvakawandisa mumarudzi ese emapurojekti 'akawanda.
Zvekare, iyo inotapira 'muchinjikwa-chikuva' seyemuno app manyepo, iro rechokwadi zano repamuchinjikwa-chikuva chiri pawebhu.
Dai Mono yaive zvazvinoti saka wadii kuronga mashandisiro makuru nemitambo muC # kutora mukana wechitatu mutengo wemusika panzvimbo yeplatform imwe chete?
Tsoko? Kwete, maita basa, ngaakwire mumuti waakadonha.
Kutanga, C # inonyanya kushandiswa kupfuura python pasirese, kunyangwe iri shoma
Chechipiri, ndakasiya chinongedzo nemarezinesi ari pamusoro ndikatsanangura zvakajeka, saka kana iwe uchida kurova gonhi uchipesana nezvakanyorwa, enda mberi ...
Java inogumbuka maererano nekuita uye ndiyo yechipiri mutauro unonyanya kushandiswa, kufunga kwako hakuite. Zvakafanana neni ndichiti "KANA Linux yaive yakanaka sezvavanotaura, yaizoshandiswa ne90% yevashandisi vepa desktop, asi mashandisiro anoita 1/2% ndeye crap."
Uye pakupedzisira, vagadziri vazhinji havana kana hanya nezano rekuita muchinjiko-chikuva mashandiro, uye kana vakadaro, vaizozviita neJava.
Hazvisi zvekuita zvine hunhu, asi neC "michi" zvinondivhiringidza. Zvirinani ndinosarudza kushanda neye mastodonted Java kana iyo inoshamisa C ++ (kunyangwe gore rino ivo vangondidzidzisa C # neiyo Visual Studio yemakumi madhimoni.
Ndine urombo @ eliotime3000, asi kusvika nhasi handisati ndaziva application yeJava yedesktop inoshanda chaizvo nekukurumidza ...: /, pa c +++, hongu zvirinani, asi ndinozviona zvakaoma.
Ini ndinokunzwisisa, sezvo neJava, ini ndakaronga uye mhedzisiro yenjodzi. Kana iri C ++, ndinoida nekuda kwekuoma kwayo uye nekureruka kwayo kushanda nayo.
Zvisinei, kushanda ne teknolojia kubva kuMicrosoft, kunyanya kana iwe ukashandisa Visual Studio .NET.
1) Ndakaona account yako paPhoronix
2) Tiobe haigone kushandiswa sereferenzi.
3) Tiboe kana TIOBE?!
Ini ndinotanga nekukupindura nenzira iyi:
«Kutanga, C # inonyanya kushandiswa kupfuura python pasirese, kunyangwe iri shoma
Zvine musoro kufunga kuti Python iri kungonyatso shandiswa kwenguva pfupi uye M $ yanga ichingotenderedza kwekanguva.
"Chechipiri, ndasiya chinongedzo nemarezinesi ari pamusoro ndikatsanangura zvakajeka, saka kana iwe uchida kurova gonhi uchipesana nezvakanyorwa, enda mberi ..."
Hwako fanboyism ine Micro $ kazhinji haina miganho, handizvo here?
Mono (vhezheni 1.1.10) ndeimwe yemapakeji esoftware ayo nhengo dzeOIN dzinovimbisa kuti hadzizoshandisa patent dzadzo kupokana.  Shanduro 1.1.10 inobva muna 2005.
Muna Mbudzi 2010, Microsoft yakatenga 882 patent kubva kuNovell (sechikamu chidiki chekutengesa kukuru uko Attachmate akatenga yakawanda yeNovell). Izvi zvinogona kunge zvakanetesa OIN. (Unogona kubatsira here? Mhedzisiro yeiyi haizivikanwe. Ruzivo gamuchirwa pano: Novell # Ino_iyi_yakamutswa_OIN.3F) »
Kunyangwe zvadaro chiri chokwadi kuti iyo ndima imwechete inopera:
«Microsoft pamwe haina kuwana chero patent ingave ine njodzi kune vashandisi veMono. Chekutanga, Microsoft yanga yatove ne .Net patents, saka kana Novell anga aine chero, izvi zvinongova zvasara. Kechipiri, zvinoita sekunge zvipikirwa zveMicrosoft (s) zvingashanda zvakaenzana kune patent dzichangobva kuwanikwa Nezvikonzero zviviri izvi, patent dzichangobva kuwanikwa dzinongova nenjodzi semapateni akange atove naMicrosoft, saka anongova maricho. »
Hazvisi pachena kana nyowani .NET _SI_ budiriro dzichava nemvumo mune ramangwana nenzira yekubata zvinobudirira C # vanogadzira nemabhora.
Iyo yakapusa -dhijitori- modhi iyo yagara yakaratidza kuve inobatsira.
Kwete izvozvo chete, sekutaura kwechinyorwa cheWikipedia nezveSilverlight / Mwenje wemwedzi.
«Kuvhurwa sosi yekushandisa kweSilverlight, inonzi Mwenje weMwedzi, yakaverengerwa kubvira Mono 1.9.  Mwenje wemwedzi 1.0, uyo unotsigira iyo Silverlight 1.0 APIs, yakaburitswa muna Ndira 20, 2009. Mwedzi mwenje 2.0 inotsigira Silverlight 2.0 uye zvimwe zvinhu zveSilverlight 3.0.  Kuburitswa kwekutanga kweMoonlight 3.0 kwakaziviswa muna Kukadzi 2010 uye kune zvinyorwa zvekutsigirwa kweSilverlight 3.
Iyo Moonlight chirongwa chakasiiwa musi waMay 29, 2012.  Sekureva kwaMiguel, zvinhu zviviri zvakaisa mucherechedzo mugumo weprojekti: Microsoft yakawedzera «zvirambidzo zvekunyepedzera» izvo «… zvakaita kuti zvisashomeka pakurongwa kwedesktop…», uye tekinoroji yakanga isati yawana traction yakakwana pawebhu. »
dambudziko nemudiwa wako Micromierda ndeyekuti vanogona kukamba bhodhi kana vadaidzwa kwavari sezvavakaita neSilverlight.
KUVIMBIRA PAKUDZIDZWA KWEBITTER CORPORATION SEZVAKAITIKA MICROSOFT INSTEAD YOKUSARUDZA OPENSOURCE KUSIMBISA VANHU KUNYANYA KUNAMATIRA MAPFUPA MAVIRI PAMETSI AKO.
«Pfupiso: Mono kuFOSDEM yakanzurwa uye kazhinji panenge pasina Mono kufukidza mazuva ano»
Ndeipi poindi yekudyara muchirongwa chakafa kana neakanyanya, kushomeka kushoma kubva kune vanopenya vanogadzira papuratifomu iyo inonhuwirira yakaipa kubva pakutanga uye ine chete Ballmer akapfeka seye cheerleader achisvetuka kumusoro achiti "Enda Mono, Enda!"? Ndiani fuck anoda izvozvo!? Ah hongu, pandev92, kurudyi.
Mono Inogona Kubatwa SeMicrosoft Project:
«Ummary: Nemakopirita eMicrosoft, patent, uye marezinesi muMono, pamwe nemukuru mukuru aishandira Microsoft uye achitsigirwa nemari kubva kuvarwi veMicrosoft, hazvina musoro kubata Mono sechinhu chero chipi zvacho kunze kwekuwedzera kweMicrosoft.
Ivo vaviri Mono naMiguel de Icaza havawanzo kuita nhau zvakare. Zvichida nekuda kwekutaura hupenyu hwemhuri, wekupedzisira uyu akasiya nzvimbo yeruzhinji uye mushure mekunge kambani yake nyowani, Xamarin, yawana mari kubva kuMicrosoft veterans 'VC, zvakachengeteka kufunga kuti zvido zveMicrosoft / hutungamiriri zvichagara nhaka yakawanda pamusoro peiyi purojekiti. Iyo inobatsira openwash .NET uye kunyepedzera kunge ichinjika-chikuva. Mwenje wemwedzi wakaita zvimwe chete nezveSilverlight. Sekuisa kwaRichard Hillesley kutanga kwesvondo rino, Microsoft ikozvino iri kubatanidzwa zvakanyanya. Kutora chikamu chake: "Microsoft yakapa imwe nhanho yekukurudzira kuna Mono mukuziva kuti chirongwa ichi chakabatsira kufambisa izwi uye kuunza vanogadzira mudanga reMicrosoft. Ichokwadi zvakare kuti vanhu vazhinji mukati meMicrosoft vaive nechido chechokwadi mukusimudzira pfungwa ye'akavhurika sosi ', kazhinji netambo dzakasungirirwa, uye Mono akapa kutendeseka kuchitauro cheMicrosoft chekuti matekinoroji ayo aive akawanda-mapuratifomu, anowanikwa kune vemahara software vanogadzira uye 'chikamu chewebhu yakavhurika'. »
Dzazvino Debian GNU / Linux Kuisa Gnot Kana Mono Yabviswa:
Pfupiso: Sarudzo inonakidza kubva kune vagadziri veDebian / mapakeji, avo vanobatsira avo vanoramba uye kurasa Mono
Kunyangwe Debian achishandisa GNU + Linux yeiyo ortho, ivo vachiri makwikwi ekupararira kwemahara uye epasirese masisitimu anoshanda uye izvo zvinofanirwa kudzivirirwa kusvika kurufu.
Iyo inokurumidza inomhanya Java desktop application? MuCommander, enda google icho. ZVINOKOSHA kwazvo ndingati.
Java yakagumbuka maererano nemashandiro uye ndiyo yechipiri mutauro unonyanya kushandiswa, kufunga kwako hakuite. Zvakafanana neni ndichiti "KANA Linux yaive yakanaka sezvavanotaura, yaizoshandiswa ne90% yevanoshandisa desktop, asi mashandisiro anoita 1/2% ndeyekushandisa."
Chokwadi, pamwe nekuverenga kwechipiri iwe unonzwisisa zvandanyora, ndinokukoka. Kana iwe uchiri kusakwanisa kududzira, ndiudze uye ndichafara kutsanangura kwauri zvizere.
"Uye pakupedzisira, vagadziri vazhinji havana kana hanya nezano rekuita muchinjiko-chikuva mashandisirwo, uye kana vakadaro, vaizozviita neJava"
NGATIONEI, KUTI TIVE ZVAKAjeka: Microshit's MANTRA panguva yekuunza .NET kuGNU + Linux yainyatso kuratidza kuti kukura kwayo kwaive (nezwi http://goo.gl/hDqLwY) MULTI PLATFORM.
Saka, ndeipi fuck iwe yauri kutaura nezvayo?
Kana iwe uchida Microsoft uye izvo zvinokuita kuti ufare ... uye mushe, gamuchira, hupenyu hupfupi, kana iwe uchinakidzwa ... izvo ... zvakanaka, ipapo iwe, ndihwo hupenyu hwako, asi zvirinani kuti ini ndakabuda muwadhiropu panzvimbo yekuvanza manzwiro ako nevamwe nharo.
Nah, iwe unonyatso kuziva kuti ndinobva kuPython, uye nguva pfupi yadarika yakawanda php uye JS nekuda kwezvikonzero zvebasa, yangu iri kuwanda kwewebhu (yakawanda nemafungiro nemaAPI nemaJS emabasa mazhinji-asynchronous basa, irikutamba zvinotyisa).
Zvandinotaura ndezvekuti, kana zvikave zvakakosha kushandisa C #, uyezve kuti handichakwanise kuzviramba uye zvakadaro, pamwe ndinoshandisa mono, asi ini handinzwe zvakanyanya shamwari yepuratifomu.
Mhoro, unonzwa shamwari, chii chaunokurudzira sechirongwa chekushandisa chinoshandisa python uye qt? Ndakamirira mhinduro yako nekukurumidza.
Ini ndinoshandisa maEmacs kune zvese saka handigone kukuudza, asi mubvunzo nekukurumidza musiki anoziva zvese anodzosera akati wandei kurova: http://lmgtfy.com/?q=ide+for+python+and+qt
Yakanaka kwazvo, asi kana iwe ukashandisa Debian Stable (Wheezy), unofanirwa kuwedzera backport mukati /etc/apt/sources.list mutsetse unotevera (kungave nekugadzirisa iyo faira neGNU Nano kana kushandisa Software Zvinyorwa uye / kana zvakafanana) >>
Kana iwe uri kushandisa Debian Kuedza uye / kana kusagadzikana, MonoDebelop yatovepo.
tambo zita = "mikasa";
// SNK yakawanikwa.
Nenzira, pane chero munhu akashandisa Vala-C kana granite? (Ichi chepakutangaOS)
Pindura kuna Lewis
Hahaha wandibata 😛
hahaha, hongu ndakazviona zvakare
Pindura kune nquiroga
ELAV inofarira kuronga neMONO C #.
ELAV muteveri akatendeka waMiguel De Icaza nechirongwa chake cheMONO.
Iwe wakazvitora kubva pamuromo wangu, ndinoreva, kubva kuminwe yangu .. U_U
Ndinoreurura kuti ndakaedzwa kuti ndidzidze C #, sezvo iyo NET chikuva ichibvumidza kushanda nemutauro uyu uye iwe unogona kugadzira desktop desktop zvinomhanya pane chero muchina neNET yakaiswa, ndiko kuti, dzidza mutauro unondibatsira kugadzira zvirongwa zvinomhanya 90% yemakomputa ari munyika ari kuyedza (Ehe pane maBhaibheri mazhinji eNET uye unofanira kuiisa pekutanga kuti ugone kuishandisa), zvakanyanya kupfuura kudzidza kuronga kweiyo 1% (XD ndine hurombo linuxeros ). Java iri zvakare kuyedza, nekuti inobvumidza iwe kuronga chimwe chinhu chinoshanda pa100% yemakomputa pasi (Unofanirwa kuisa Java uye chengetedza mutsauko uripo pakati peshanduro dzeJava uye zvinhu zvisingashande zvakafanana mukushanda kwese system) Sarudzo yakanakisa inoita kunge Java. Kunyangwe NET ichikurumidza kupfuura Java, Java yakapararira. Zvirinani enda kuJava. Zvakare, MONO haisi NET, uye hapana chekuvimbisa kuti ichashanda paWindows, ndoda mamwe ma distros.
Nenzira ye archlinux, chirongwa ichi chisati chashanda. Sezvo arch yakave yakakurumbira, zvisinganzwisisike zvimwe zvirongwa zvakatanga kumhanya.
Pasi pechirevo chimwe chete, zviri nani kushandisa Python, inoshanda zvachose mumasisitimu ese anoshanda uye zvinoenderana nemhando ipi yekusunga yaunoshandisa iwe unogona kushanda nekukurumidza zvakanyanya mu Java nguva yekumhanya.
Python yakanaka kwazvo, asi mune dhatabhesi manejimendi inoshomeka, kuti iite python ishande ne mysql waifanira kurodha chinongedzo icho chaingowanikwa kune 32-bit kuvaka, saka waifanira kushandisa 32-bit python uye 32-bit myslq . Zvino kuti ishande, iwe waifanira kuita nhanho dzakakura kwazvo. Python inoitirwa kushanda ne slqlite. Uye iyo "object orientation" ndeyekuseka, hongu zvakanaka chaizvo kuwana zvakapusa uye nekukurumidza zvirongwa zve desktop, mumaminitsi gumi ne pyqt unowana chimwe chinhu chakanaka, ini handidi kubheja python yechinhu chakaomarara chaizvo kana nechimwe chinhu chiri nyore.
Uri kutaura nezvei? iyo python yekubatanidza yeiyo mysql yakaipa? kubvira rini usingashandisi python? Kubva pep 249 zvabuda http://www.python.org/dev/peps/pep-0249 iyo inodzora kwese kubatana kweDB mune yakabatana maitiro nematanho matatu uye nemitsara mitatu iwe unotove uine DB inomhanya.
"Object orientation" joke? Mu python zvese chinhu kana uchida kushandisa dhatabhesi rako sechinhu chaunoshandisa MySqlAlchemy inova ORM, uye kunyangwe mibvunzo ku database yako inobatwa sechinhu. Izvi zvinoitwa zvakare muDjango uye ayo mamodheru.
Uye pakupedzisira chinobatanidza (Zvakaoma kuisa nenzira) kungoshandisa apt-tora kuisa python-mysql, uye iwe unogona ikozvino kuendesa MySQLdb, uye gadzira chinongedzo uye chituko.
Pasina kutaura kuti zvinonyanya kugadzira kuti programmer ishande nePyQt kana PySide pane Kushanda neC ++ inova chizvarwa cheQT, mukushambadzira kweStackover une nhaurirano yekuti ndedzipi pamitauro iyi mbiri dzinobereka , Ini handidi kutaura zviri pachena apa.
Ini ndinofunga iwe unofanirwa kuverenga zvishoma usati wataura uye usati shamwari yako yaive (munguva yakapfuura) yakaoma kurodha pasi chinongedzo chakaiswa neyakareruka apt, paman, yum ..
Ini handina kuzviita mumahwindo asi ndakavatakura ndisina kuchinja chero kodhi, kungoisa kwavo kutsamira nekuisa python, uye kana usina apt nekuti uri pamahwindo une PIP uye unogona kuiisa seizvi " python pombi yekuisa mysqldba ", uyu musiyano mukuru neakakodzera.
Kana iwe usingade kushandisa pombi iwe unayo mumahwindo dhizaini, apa iwe uine zvese zvinongedzo zve 32bit uye zve amd64 mu executable.exe
wakambo gadzirirwa ne python yekuwana bd myslq pane kukunda? Ini handimbotaure nezve linux, iwe unofanirwa kuverenga chirevo changu zvakanaka nekuti ini handina kuzombotumidza zita rekuti pyside, kana chero shamwari. Ha
Haisi munda wangu zvakadaro, desktop. Kwamunoona simba rePython iri muDjango, semuenzaniso.
Kunyangwe ndichifunga kuti dhatabhesi manejimendi manejimendi akavandudza matani munguva dzichangopfuura, ini ndakabviswa kubva pamazita kwenguva yakati.
Simba rePython rinotarisana nekuvandudza kugadzirwa kwevagadziri, nekuvandudza nguva yakapihwa chirongwa, kune izvi mhando yekodhi yakavandudzwa, zvichiita kuti zvive nyore kuchengetedza. Izvi munzvimbo yemabhizinesi zvinowedzera purofiti nekukwanisa kuisa chigadzirwa pamusika munguva pfupi uye nemhando yepamusoro inogoneka, iine huwandu hushoma hwevanogadzira hwapihwa chirongwa ichi.
Iyo hat hat kune vese mabhizinesi uye zvisina kurongwa vagadziri.
Uye ini handipokane nazvo, asi zvinobva zvauya dambudziko rekuita uye chii kana mutauro upi waunoshandisa.
Python inogona kunyatsoenderana neJava munguva yekumhanya, asi dzimwe nguva kugadzirwa kwacho hakubhadhare kurasikirwa kwesimba iro rakanyorwa seC ++ rinopa semuenzaniso.
Iyi ndeimwe yematambudziko
Ehe ichashanda mumahwindo, uye nguva dzose zvakare, rangarira kuti mumawindows unogona kumhanyisa kusvika .net shanduro 1.0…, kubva pagore rekuzvarwa kwaKristu ahahah.
Inoshanda zvakangofanana neJava (kodhi yakafanana chero kupi)?
Kwete chaizvo asi zvakangofanana, Java ine yakakura mapuratifomu.
Python? Shamwari, python ingoisa iyo paPC uye ndizvozvo. Chero zvazvingaitika, zvakare maraibhurari (seJava) atove kushanda.
Muchokwadi, iwe unongofanirwa kuiisa paWindows nekuti inouya nekumisikidza paLinux uye OsX… iri muchinjikwa-chikuva.
Ini ndaifunga kuti urikukumbira C #, enzanisa C # neJava, usambofa ukaenzanisa python, iwe unoziva ini chirongwa muPython Nano. -.-
Zvakanaka isu tiri papeji imwechete, ini ndinobheja Python nezvose, ndinoti seGoogle "Python patinogona uye C ++ patinofanira".
Qt4. Zviri nyore. Uye regai windowslerdos irambe ichimedza tsoko.
Qyoto inoita kuti zvikwanise kugadzira Qt kunyorera uchishandisa C #, kana chero imwe .NET mutauro. Qyoto inoshandisa KUSVIRA, uye inopa mukana kune angangoita ese makirasi eQt. Iyo yemahara uye yakavhurwa sosi ine LGPL rezinesi.
Pakati pe Java mastodon uye iyo C # tsoko, ini ndinoenda kune mastodon.
Zvinoita here kugadzira mashandisiro uchishandisa windows mafomu pane linux neichi?
Hongu asi ...
Inotarisa mutorwa pane asiri-Windows mapuratifomu.
Iko hakuna kudikanwa kwekukakavara nezvechirongwa mitauro, nekuti izvo manakiro ari kana mumwe ari nani pane mumwe, munhu wese akasununguka kusarudza, ini ndinoronga muJava uye ndiri kuita mushe nekuti inononoka kupfuura c ++ maererano nendangariro kunwa, kutendeseka. Asi pachangu ndinoifarira. Ini ndinofunga kuti iye semushanduri ane misimboti yake asi kana iwe uchida kuzvinetsa, zvakanakisa kuziva zvirinani zvishoma nezveumwe neumwe uye iwo aunoda kana uine mikana yakawanda yezvehupfumi yekudzidza zvizere kana kugona kwavo kana uchikwanisa. Mutauro wega wega une zvayakanakira nezvayakaipira. Python mutauro wakanaka asi pazvinhu zvikuru hauna kukwana sezvingaitwa nedzimwe mitauro. Saka zvinoenderana nezvaunoda.
Chiitiko chakaipa neMonoDevelop muKDE, yakapunzika kazhinji uye ndinonzwa kuti haina kupa upamhi hwekushanda neAPP.NET padanho rekureruka.
(vanondirega ndiite webhusaiti ine ASP.NET kuyunivhesiti)
Handizive kana iwe wakashandisa qtcurve yemusoro wenyaya, nekuti semuenzaniso ini ndinoziva kuti idhayeti inozivikanwa.
Kana ini ndikaishandisa uye pandakatanga meseji yakaonekwa ichindinyevera chaizvo izvo, chinja qtcurve ive oxygen. Matambudziko akaunzwa kwandiri ainyanya mune yekuzadzisa yeASP
Nekuda kwekuda kuziva ini ndaida kuisa monodevelop nepa ppa iwe yawakaisa uye pasuru
monodevelop-current isipo kubva pairi, kusiyana ne monodevelop-lastest
C # syntax inorova C, C ++, uye Python.
Ini ndakakwanisa kuzviongorora pachangu.
Uchishandisa Mono Gtk uye VALA Gtk.
C # ndicho chinhu chepedyo kuna C asi chakashanduka.
Ini ndashanda neC ++ uye syntax inowanzo kuve yakaoma kana iwe usina bhuku rezvinongedzo, munzira dzakawanda haina chinhu chakafanana neC mune syntax.
C # haidi mafaira emusoro senge (C uye C ++)
Iko kumhanya kweC # uye VALA kwakaenzana neiyo yeC paunenge uchiita.
NaC # iwe unochengetedza nguva kana uchigadzira chirongwa sezvo syntax iri nyore kwazvo.
Kutenda musangano uyu, ndinotarisira nyaya inotevera. Ndinovimba kudzidza mutauro wepurogiramu kamwechete 😀
Dai Microsoft yaigona kunge yakaita chimwe chinhu kupokana naMono, ingadai yakatozviita kare, unogona kuva nechokwadi nazvo. Kusvikira nhasi, hauna njodzi kunze kwekushandisa Java kana Qt.
Kugona chose! asi ini ndine mubvunzo, ko mutengesi wekutengesa haana kunaka senge yekuona studio kana qt dhizaini?
Pindura kuna Maxiro
Ehezve kana xdd, semuenzaniso mune imwechete idei mu gtk xd ...
Bryan Rodriguez akadaro
Iyo yekumisikidza haina kufanana neyakaiswa iwe mune iyo dzidziso. Pane zvinhu zvisina kujekerwa kwandiri semabasa ese anoonekwa pakutanga asi ini handizive, ini handisi nyanzvi mumutauro uyu.
Pindura Bryan Rodríguez
Lol, kuiswa kwacho hakuna kufanana sei? Kana iwe usingakwanise kuwana iyo monodevelop package, shandisa synaptic, tsvaga uye wobva wadzvanya kaviri.
Ini ndaigona kutozviisa asi ndaifanirwa kutaipa mimwe mirairo mune iyo terminal asi ndinokutendai zvikuru.
.NET paLinux chinhu chakapusa icho chete Icaza's hdp yakauya nayo
Ini ndoda kuziva maitiro ekuisa .Net chimiro
Kutendeseka, iyo posvo iri kubva kune MicroShit fan.
Muchinjikwa-chikuva C #? Ndeipi fuck ine murume uyu muhuropi hwake? Ini ndinokukoka iwe kuti unyore Banshee uye utarise ako maforodha azere nema .dll mafaera uye akati wandei .exe ini ndinosiya chinongedzo ichi. http://banshee.fm/.
C # haina kuyambuka-chikuva kana iyo mono chirongwa ichiita mashiripiti, zvazvinoita chaizvo ndeyekutendera kuti iitwe kuburikidza nemaraibhurari ayo mushure mekunyora iyo .exe ino inguva yekuti Mono iiswe nekusingaperi, zvikasadaro hapana chingaitwe kunyangwe Mushure mekunyora chirongwa ichi, kana Microsoft isina kutaura chero chinhu chinopesana neMono chirongwa ndechekuti ine kufarira kwakanyatsojeka uye iwe unoona zvakaitika neXamarin sezvo iyo kambani inoda kuwedzera kuti ibatsirike, kwete kuti ibatsirwe nemasayendisiti emakomputa.
Batanidza Banshee Archlinux: https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/banshee/
Ini ndinokoka muridzi wepositi kuti aongorore zvinoenderana nezviri mupakeji.
Yakanakisa Linuxero Desktop: Gumiguru 2013